Tsy azo antenaina fa hivaha ny krizy raha tsy miverina i Ravalomanana hoy i Ramy – MyDago.com aime Madagascar
Magro Behoririka, isan’ireo toerana mahavory vahoaka, saika ho isan’andro, nandritra ny 27 volana izay. Be ireo mpandahan-teny sy mpikabary nifanesy teto, nisy ireo « nahazo seza » noho ny fivadihana ny tolona, mbola maro kosa ireo « nahazo galona » noho ny fitiavan-tanindrazana. Entinay aminao ireto ny santionan’ny kabary hita teto androany :
Guy Roger : nambaran’I Guy teto an-kianja fa nivoaka ny fonja i Jules vadin’i Sitraka, iray tamin’ireo gadra politika noho ny tolona.
Tondrozotra eken’i Ravalomanana ihany no eken’ny vahoaka tarihany ary iarahana mametraka sy manomana daholo ny zavatra rehetra atao ao hoy izy.
Gahby Vakiniadiana : tsy izay mpanao “business” politika no amadika ny tapakin’ny filoha 14 eo anivon’ny SADC izay tany Sandton hoy izy.
Feno : tsy mety voavaha ny krizy ary vao mainka aza miampy ny very asa. Ny firosoana amin’ny fifidianana hataon’ny mpanongam-panjakana io dia hanampy krizy vaovao indray ary raha ny mpanao « business politika » no antenaina dia very Madagasikara hoy i Feno.
Dominique : aoka tsy atao teny am-bava fotsiny ny fihavanana fa atao filamatra mihitsy hoy izy.
Tsy mety ireny tenin’i Pedro ireny satria mampisaratsaraka sy mampizarazara olona .
Nisy manamboninahitra polisy nampivory tao amin’ny BC, tsy hampodiana an’ i Ravalomanana hono. Fa inona no mitranga ? Olona meloka ve dia hangataka sy misisika hanaovana fanadihadina mahaleotena ? Io indray na DST, na Atsimodrano, na BC, na Emmoreg tsy mahasakana any i Ravalomanana hody izany, ireo gadra ireo koa tsy maintsy mivoaka ary ny tetezamita tsy misy Andry no vahaolana hoy Dominique.
Sylvain : tsy miova foto-kevitra isika hatramin’ny farany ary hery sy voninahitra izany.Na maro aza ny famitahana mbola tsy kivy fa mijoro hatrany ny vahoaka. Io ilay fijoroana amin’ny marina ka hazahoana fahefana.
Doc Julien : ny vahoaka dia fanjakana ka izay no tsy ahazoan’ ny FAT fankatoavana iraisam-pirenena satria ireo telolahy ireny no nomen’ny vahoaka fahefana ary maha “credible” azy ireo ka manantena isika fa tsy ho ela dia hijoro ny tetezamita tena izy.
Mitonatonana any Bekily i Fabergé mametraka PDS. Aza misandoka ianao fa tsy olon-dRavalomanana.
Ramy : azo antenaina ve fa hivaha ny krizy nefa tsy miverina i Ravalomanana, tsy mivoaka ny gadra politika ary tsy mipetraka ilay tetezamita tena izy ? Tsia ny valiny.
Manana famatsiam-bola i Pedro ary nanao famotsina vola maloto fa takonana amin’ny asa soa. Ny olony no maro teny amin’ny 13 mai.
SITIMAD izay fananan’i Mamy Ravatomanga sy Andry dia mitrandranka ilménite any amin’ny faritra.
I Simao dia ao anaty ny réseau France-Afrique.
Tsy misy intsony ny indrafo amin’ny mpanongam-panjakana sy ny mpamadika palitao ary ady no atao ka na mandresy na resy kanefa ny mino tsy maintsy mandresy.
Marcel : ny mission’i Simao teto dia nanatrika ny 26 jona ihany ary tezitra aminy UA tamin’ny zavatra nataony teto.
Hitan’ny amerikana fa mbola mamehy antsika ny mpanjanaka ka navokany an-tsoratra ary naha tezitra an’i Laurent Ramaroson sy Augustin Andriamananoro. Fanadihadina no nahatonga ireny ary eo anatiny izany dia mahatsapa ny amerikana fa mamoritra vahoaka ilay fahefana.
Niteny ny CENI tamin’ny herinandro fa tsy zakany ny manomana ilay fifidianana ary olona efa voatsongonareo ihany ireny roahanareo ireny, sao dia tsy olona ny olana fa vola ? Dia tonga i Andry milaza fa hanampy izay ilaina nefa i Simao etsy ankilany milaza fa mbola hivezivezy ny tapaka ary ny NU no mametra.
Dep Mamitiana : hafatra avy any amin’I Pr Zafy, aoka tsy teny fotsiny ilay fihavanana fa hampiarina ary hamafisina ato an-kianja.
Hafatra avy amin’ny filoha Ravalomanana : vonona hanao sonia raha toa ka mifanaraka t amin’ny tapaka tany Sandton ary efa mampafantatra ny tsy mahamety ny fanelanelan’i Simao.
Auteur Solo Razafy*Publié le 30 juin 2011 1 juillet 2011 Catégories Politique
4 réflexions sur « Tsy azo antenaina fa hivaha ny krizy raha tsy miverina i Ravalomanana hoy i Ramy »
VISIBLEMENT, RAJOELINA NE SOUHAITE PAS UN DENOUEMENT A L’AMIABLE DE CETTE CRISE QUI PERDURE. IL PENSE GAGNER AVEC LE TEMPS. PEUT-ETRE MAIS A QUEL PRIX?
QUAND IL PARLE DE CRIME DE SANG COMME CHARGE RETENUE CONTRE RAVALOMANANA, PENSE-T-IL QU’IL A LES MAINS PROPRES?
Tsy ilaina akory ny mimenomenona
Tsy ilaina akory ny mipenopenona
Fa TOKONY HO ATAO ATAO RY MALAGASY A !
NY RODOBE NY RODOBE
Any aminí Dada ny lakile.
tairo amin´izay ny RODOBE
fa any amin´i dada ny LAKILE
Précédent Article précédent : Momba ilay Kabary 26 juin 2011
Suivant Article suivant : Une liste électorale transparente selon Rajoelina